गर्नै नहुने यी ३ काम ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/गर्नै नहुने यी ३ काम !
मानिसको शरीरमा हुने रातो पदार्थ मंगलसँग सम्बन्धित मानिन्छ। मंगलबारलाई सबै ग्रह मध्ये क्रुर र रक्तपातको ग्रह मानिएको छ मंगलको रातो रंग मृत्यु वा रगत सँग हुन्छ । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न ३ काम गर्नै नहुने अर्थात बर्जित गरिएको छ ।
यी काम मंगलबार गर्दा तपाइँको जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन्